ဇူလိုငျ 5, 2018 – Healthy Life Journal
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) မန်ကျည်းရွက်နုနုလေးတွေကို သုပ်စားတာ၊ ချက်စားတာ၊ ကြော်စားတာ စသဖြင့် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ စားလေ့ရှိကြပါတယ်။ မန်ကျည်းရွက်ကိုစားတဲ့အခါ ရရှိနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်။ ဆီးချိုအကြိုဝေဒနာရှိသူတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ် မန်ကျည်းရွက်က အင်ဆူလင်ခုခံနိုင်စွမ်း ကောင်းစေတာကြောင့် ဆီးချိုအကြိုဝေဒနာရှိသူ နဲ့...
ကလေး ၆၂၅ သန်းတွင် တစ်ယောက်သာဖြစ်နိုင်သည့် သားအိမ်ပြင်ပကြီးထွားသောကလေး
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ ရုရှားနိုင်ငံမှာ သားအိမ်ပြင်ပကြီးထွားတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို ရှောရှောရှူရှူ ကျန်းမာစွာမွေးဖွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်ဟာ ကလေး ၆၂၅သန်းမွေးတိုင်း တစ်ကြိမ်သာဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ အံသြစရာအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ကြောင်း ဆရာဝန်တွေက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကလေးငယ် ဗီရိုနီကာဟာ မွေးဖွားချိန်မှာ ကိုယ်အလေးချိန် ၉ ဒသမ ၁...
၀မ်းသွားတိုင်း သွေးဆင်းနေတယ် . .
မေး. ဆရာရှင့် . . အလေးသွားရင် သွေးအရမ်းဆင်းပါတယ်။ ကြောက်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။ December (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အလေးသွားရင်း သွေးပါတာဟာ လိပ်ခေါင်း၊ စအိုဝအနာဖြစ်ခြင်း၊ စအိုကွဲနာဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သွေးက အနီရောင်မဟုတ်ဘဲ...
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) စိတ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ အပတ်စဉ်ပညာပေးအစည်းအဝေးမှာ အတွေးမှားခြင်းအကြောင်းကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ စာရေးသူ- “အတွေးမှားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုအထိကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးခဲ့တာက ဘာတွေလဲ။ သူနာပြုမေရီ- “တွေးပုံတွေးနည်း အတွေးပုံသဏ္ဍာန်မှားယွင်းတာ၊ အတွေးအလျင်နှုန်း ချို့ယွင်းတာနဲ့ ကိုယ့်အတွေးကို ကိုယ်မပိုင်တာစတဲ့ အကြောင်းတွေပါ”...
ဥာဏ်အကောင်းဆုံး လူသားတို့၏ မှတ်ဥာဏ်ကောင်းစေသည့် အလေ့အထ ခြောက်မျိုး
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူတိုင်းနီးပါးမှာ အခုထက်ပိုပြီး ဥာဏ်ပညာ ပိုရှိလာအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင်ဟာဥာဏ်ပညာအရှိဆုံး လူသားတွေ မျှဝေထားတဲ့ အောက်ပါ အလေ့အထခြောက်မျိုးကို ပိုမိုခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင် အခုထက်ပိုပြီးထက်မြက်တဲ့ဥာဏ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်လာမှာ မလွဲပါပဲ။ (၁) သူတို့က လူမှုဆက်ဆံရေး...